Iindaba-Ekhohlo nasekunene NEON JOYCON pad isilawuli ngomtya esihlahleni
Ekhohlo nasekunene NEON JOYCON pad isilawuli ngomtya esihlahleni
1. Ukuhambelana okugqibeleleyo: Yenzelwe iNintendo Tshintsha-indawo efanelekileyo yoTshintsho Joycon;isethi efanayo yamaqhosha oqobo Joy-con;isandla ngasinye singasetyenziswa ngokuzimeleyo okanye siqhagamshelwe kwikhonsoli ukuze sisetyenziswe kwimowudi ephathwayo;Izixhobo ze-ABS ezikwaziyo ukukrweleka kunye nezingatyibilikiyo.I-Ergonomically ikhululekile iNeon Blue kunye neNeon Red Joy Pads.
2. Uyilo oluhlaziyiweyo oluchanekileyo lolawulo oluchanekileyo: Umlawuli ngamnye unesethi epheleleyo yamaqhosha, anokusetyenziswa njengomlawuli ozimeleyo, kwaye umlawuli ngamnye uqulethe i-accelerometer kunye ne-gyroscope sensor, okwenza kube lula ukulawula ngokuzimeleyo ukuhamba kwesobunxele nasekunene.Jolisa kwaye udubule ngokuchanekileyo.
3. Ukuhambelana kwabantu kunye nokukhawuleza: Isilawuli semisebenzi emininzi sibonelela abadlali ngeendlela ezahlukeneyo ezintsha kunye nezimangalisayo zokudlala.Uqhagamshelo lweBluetooth olungenazingcingo / olunentambo, uphawu oluzinzileyo;uqhagamshelo oluzenzekelayo;ubomi bebhetri obuhlawulelwayo bumalunga neeyure ezili-10, iiyure ezingama-20 xa udlala imidlalo ngaphandle kokungcangcazela;ukutshaja nge-console okanye i-mirco usb.
4. Nceda uqaphele:
(1) Le yeyona ndlela ifanelekileyo yokuthatha indawo yeQela leSithathu loJoy-con;
(2) Akukho NFC (amiibo) okanye iSindululo seIR;
(3) Ayilungelanga iqokobhe okanye isiphatho;
(4) Xa iNintendo ihlaziya i-console, kufuneka idibanise kwi-PC ukuhlaziya isiphatho
· Kulula ukuyisebenzisa kwaye kulula kakhulu ukuyidibanisa.
· Ergonomic kwaye ukhululekile Neon Blue kunye Neon Red Joy Pads
· Yabelana nabahlobo kwaye wonwabele isenzo sabantu ababini kwimidlalo exhaswayo.
· Umlawuli ngamnye unesethi epheleleyo yamaqhosha, anokusetyenziswa njengomlawuli ozimeleyo.
· Goba ukuze ulingane izandla zakho ngcono kwaye iyahambelana neNintendo Tshintshela njengokutshintsha kweJoy Cons.
·Ukungcangcazela kabini kunye nolawulo lwentshukumo lwenza umdlalo untywiliselwe ngakumbi.Nokuba udlala ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye, ezi zisenamandla.